1-da oktoobar oo la iclaamiyey doorashada hoggaamiyaha M - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
1-da oktoobar oo la iclaamiyey doorashada hoggaamiyaha M
La daabacay tisdag 29 augusti 2017 kl 11.51
Saddex ruux ee illaa hadda la magacaabay ama is magacaabay iney u taagan yihiin hoggaanka M.
Hoggaamiyaha cusub ee bedeli lahaa Anna Kinberg Batra, hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna ee jagada iska casishay ayaa la go’aamiyey in la dooran doono 1-da bisha oktoobar oo uu dhici doono kulan aan caadi ahayn.
Xubnaha iyo ururrada xisbiga ayaa lagu dhiiri-gelineyaa iney laamaha gobollada iyo ururrada u soo gudbiyaan magacyada cidda ey la jeclaan lahaayeen inuu/inay jagadaasi buuxiyo/buuxiso.
Weli lama cayimin goobtii iyo magaaladii lagu qaban lahaa kulanka aan caadiga ahayn, waxaase keliya oo la sheegay inuu ka dhici doono nawaaxiga Stockholm. Horay waxaa looga doodsanaa inuu kulanka aan caadiga ahayn dhaco 8 iyo 9-ka bisha oktoobar, hase yeeshee iminka la soo hormariyey muddo toddobaad ah.
Kulanka waxaa lagu dooran doonnaa oo keliya hoggaamiyaha xisbiga ee ma noqon doono kulan lagu doorto xilka kuraasta hoggaanka sare ee xisbiga.
Laamaha gobollada, ururrada, ururka dhallinyarada ee MUF, ururka haweenka (M-kvinnor), Moderat-ka furan (Öppna Moderater) iyo Moderat-ka howl-gabka (Moderata seniorer) ayaa loo qabtey illaa iyo 11-ka bisha sebteembar iney soo ban-dhigaan cidda ey jagadaa la jeclaan lahaayeen, Sida uu sheegay Anders Edholm, xog-hayaha xisbiga Moderaterna.
Illaa iyo hadda saddex laama-goboleed ayaa soo jeediyay af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Ulf Kristersson inuu la wareego kursiga ay bannayn doonto Kinberg Batra.
-Waa mid ay xaq u leeyihiin, sida uu sheegay Anders Edholm, xog-hayaha xisbiga Moderaterna.